Man United Oo Markii Ay Quus Ka joogsatay Kalidou Koulibaly & Harry Maguire U Dhaqaaqaysa Difaac West Ham Ka Tirsan Nooca Dalabka Ay Ku Dooayso. - Gool24.Net
Manchester United ayaa si dhab ah u xiisaynaysa difaaca dhexe ee kooxda West Ham United ee Issa Diop kadib markii ay kooxaha Napoli iyo Leicester City qiimo dhaafiyeen bartilmaameedyadii hore ee Kalidou Koulibaly & Harry Maguire sida ay u kala horeeyaan.
Manchester United ayaa doonaysa in ay difaca kooxda West ham ee Issa Diop ay ku kharash garayso 45 milyan gini iyo waliba ciyaartoy kooxda United ka tirsan oo aan magiciisa la shaacin laakiin wararka soo baxaya ayaa sheegaya in West ham ay ku adkaysanayso in Diop aanu iib ahayn.
Maamulka Man United ayaa markii hore doonayay in ay kooxda Napoli kala soo saxiixdaan difaaca reer Senegal ee Kalidou Koulibaly laakiin kooxda reer Talyaani ayaa xidigan ku qiimaysay lacag ka badan 100 milyan yuro.
Kadib waxay United u soo jeedsatay difaaca xulka England iyo kooxda leicester city ee Harry Maguire oo ay Manchester City kula tartamayeen balse Foxe ayaa Harry Maguire dul dhigtay qiimo dhan 90 milyan gini.
Laakiin ilwareed uu Sky Sports helay ayaa lagu shaaciyay in Manchester United ay hadda dalab 45 milyan gini iyo ciyaartoy ah ku doonayso difaaca kooxda West ham ee Issa Diop.
Waxa kale oo uu Sky Sports ogaaday in kooxda West ham United ay ku adkaysatay in ayna xataa dhegaysan karin dalab ka hooseeya 60 milyan gini haddiiba ay u furnaan karaan in ay iibiyaan Issa Diop.
Issa Diop ayaa kooxdiisa West ham u soo cyaaray 38 kulan xili ciyaareedkii soo dhamaaday, waxayna xagaagii la soo dhaafay Hammers xidigan ka soo bixiyeen 22 milyan gini kadib markii ay kala soo wareegeen kooxda Toulouse.
Kadib guuldaradii 3-1 ka ahayd ee Manchester united ka soo gaadhay West ham United xiliyadii ugu danbeeyay waqtigii Jose Mourinho ayuu macalinka reer Portugal si gaar ah u amaanay bandhigii uu Issa Diop sameeyay.
Si kastaba ha ahaatee, diirada Manchester united ee difaac dhexe raadinta ayaa hadda si buuxda u haysa Issa Diop waxaana la sugayaa haddii ay maamulka Ed Woodwards ay horumar ka samayn karaan xaalada.